Toy Story 4 dia ode ho an'ny 3D sy sary mihetsika miaraka amin'ny antsipiriany | Famoronana an-tserasera
Rehefa fantatsika izany Toy Story 4 dia tsy hanana Toy Story 5 nandritra ny fotoana ela, hoy i Pixar tenany rehefa te-hanao sarimihetsika hafa miaraka amina mpilalao vaovao sy maro hafa izy (ahoana no hitrangany amin'ny The Incredibles 2), manohy mampiseho ny ambaratonga mahavariana amin'ny antsipiriany izay hita tao amin'ny tapany fahefatra amin'ity sary mihetsika lehibe ity isika.
Tokony hotadidintsika fa nanao ahoana ny fiandohan'ity taonjato ity izay nipoitra ny sarimiaina 3D ary mbola tsy tazana toy ny hoe mety hihoatra ny sarimiaina kilasika izany. Raha ny marina dia a lohahevitra ifanakalozan-kevitra ao an-dakilasy rehefa nianatra ny fampianarana Animation Lengkap amin'ny ESDIP.
Ankehitriny tsy afaka milaza ny mitovy izahay sy ny Nanafika ny fotoam-pialam-boly nataontsika 3D milalao sarimihetsika lehibe. Toy Story 4 ny Toy Toy 3 ary, ankoatry ny tantara, ho an'ny kalitao miavaka an'ny XNUMXD misy antsipiriany feno devoly.
Raha manitatra ny sarin'ny Toy Story isika dia afaka manao izany tadiavo izany haavon'ny antsipiriany izany ao anaty akanjon'i Woody izay ahitanao ireo "volo" mifikitra amin'ny lobaky lamba. Ny firafitra omena amin'ny singa tsirairay mandrafitra azy dia ohatra iray hafa.
Na ny satrok'i Woody izay raha mijery tsara isika dia afaka mahita ahoana ny fandehanan'ny tady amin'ny lavaka izany dia manana ny nuansa ary toa tena namboarin'olona mahay satroka.
Pixar dia nanao izay vitany rehetra hamoronana sanganasa kanto sary mihetsika 3D miaraka amin'ny Toy Story 4. Ary mila mijanona fotsiny ny playback isika mba hahitana ny haavon'ny antsipirian'ny seho tsirairay, ny toetrany ary ireo vokany maivana ireo.
ny mitovy volomaso Buzz Lightyear miaraka amin'ny glitters ary ireo nuances toa ny saribakoly tena misy tanteraka amin'ireo maso noforonina tsara ireo. Ode amin'ny 3D tsy misy fisalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny haavon'ny pitsopitsony tsy mampino ao amin'ny Toy Story 4